Postano 2.5: Ku darista Hal-abuurka iyo U-habeynta Muuqaalka Muuqaalka Bulshada | Martech Zone
Waxaan ka qornay waxyaabaha cajiibka ah xarumaha taliska warbaahinta bulshada iyo bandhig faneedyada waxaa ku shaqeeya Postano, oo ah kafaala-qaadaha boggan. Postano waa barta aan u adeegsano inaan ku daaweyno barkeena lugta ee soo bandhiga qoraalo lagu xusayo kafaala qaadayaashayada warbaahinta bulshada. Postano waxay sii waday inay horumariso bixinta suuq-geynta muuqaalka ah ee sii deynta cusub, si deg deg ah u noqda barxad horseed u ah soo bandhigida waxyaabaha ka kooban isticmaale isboortiga, moodada, badeecada wax soo saarka macaamiisha, madadaalada, safarka, iyo toosinta wakaaladaha xayeysiinta.
LA Kings waxay adeegsadeen muuqaalka Sawirka Mosaic, oo ka kooban sawirro taageerayaal ah oo lagu calaamadeeyay #WeAreAllKings, boggooda kadib markay ku guuleysteen koobkii Stanley.
Sii deynta nooca 'Postano' 2.5 waxaa ku jira xulashooyinka kala shaandheynta bulshada ee horumarsan, Tifatiraha Qaabdhismeedka indha indheynta caadooyinka ah, muuqaalada xogta cusub ee firfircoon, iyo wax soo saarka kale ee wax soo saarka. Wadajir ahaan ku daristaani waxay abuuraan barxad sare oo awood leh oo loogu talagalay noocyada si loo ogaado taageerayaashooda, oo si dhakhso leh loo daaweeyo loona daabaco waxyaabaha ugu fiican ee taageerayaasha oo dhan laga soo qaato hal dashboard.
Isku-darka waxyaabaha bulshada ka socda ololeyaasha ee ku wajahan bay'adaha sida dhacdooyinka, dukaamada tafaariiqda, garoomada, iyo meelaha laga ololeeyo ayaa is beddeleysa sida summadduhu u aqoonsadaan taageerayaashooda ugu waaweyn ugana shaqeeyaan macaamiishooda. Sii deyntaan, waxaan siinnay macaamiisheenna qalab aad u xoog badan oo gacan ka geysanaya sii deynta hal-abuurkooda. Macaamiisheennu waxay raadinayaan inay u kaxeeyaan muuqaalkooda muuqaalka bulshada heerka ku xiga, iyo astaamahan cusub ee muhiimka ah, si hal abuurnimo iyo mala awaal ah ayey sidaas ku sameyn karaan, runtiina soo saari karaan khibrado hal nooc ah. Justin Garrity, SVP, Postano
Tifatiraha Qaabka - Qalab shaashadda-shaashadda ah, oo u oggolaanaya noocyada inay abuuraan muuqaalo bulsheed caadiya oo leh awood u leh inay wax ka beddelaan noocyada, midabada, oo ay ka doortaan noocyo qaabab soo jiidasho leh leh. Tifatiraha Qaabdhismeedka waxaa ku jira tifaftiraha CSS si uu u siiyo naqshadeeyayaasha websaydhka si aan horay loo arag xakamaynta muuqaalka iyo dareemidda aragtidooda. Tifatiraha Qaabdhismeedka sidoo kale waxaa ka mid ah awoodda lagu dari karo sawirrada laguna dhejin karo waxyaabaha kafiil ahaan u ah aragtiyada is-dhexgalka ee muuqaalka.
Durdurrada Smart - Bixi kontaroolo shaandhayn oo badan oo loogu talagalay ka mid ahaanshaha iyo ka reebista xusayaasha, hashtags, iyo ereyada kale ee muhiimka ah. Smart Streams waxay u oggolaaneysaa noocyada inay u qaabeeyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin habka saxda ah ee lagu hagaajinayo habka xajinta iyo xulashada UGC. Qalabkan Postano Platform wuxuu ka caawiyaa sumadaha inay u muujiyaan astaamahooda gaarka ah dhagaystayaasha muhiimka ah, ugana dhigaan sheekada sheekada iyada oo loo marayo aragtida bulshada mid fudud.
Muuqaallo xog cusub oo xoog leh - Muuqaal cusub oo sawir muuse ​​ah (sawirka hoose), kaydinta biraawsarka maxalliga ah si looga hortago kala-goynta internetka inay saameyn ku yeelato bandhigyada, awoodda hay'adaha kormeerka bulshada ee fudud, iyo hagaajinta xawaaraha.
Isku xirka Smart Streams wuxuu u oggolaanayaa noocyada inay abuuraan durdurro loo qoondeeyey oo ka kooban waxyaabaha taageereyaasha loo sifeeyey baahidooda saxda ah ee ololaha bulshada.
Tifatiraha Qaabdhismeedka wuxuu siiyaa magacyada kontorool buuxa si loo abuuro loona habeeyo aragga bulshada si loo soo bandhigo.
Postano waa waqti-dhab ah, madal suuq-geyn muuqaal ah oo lagu helo oo lagu daaweeyo waxyaabaha ugu fiican ee taageerayaasha bulshada ah isla markaana lagu daabaco waxyaabahaas oo ah aragtiyo la yaab leh oo ku saabsan shabakadaha, moobiilka iyo shaashadda tooska ah ee loogu talagalay warshadaha sida isboortiga, tafaariiqda, dhacdooyinka iyo wixii ka dambeeya. Postano wuxuu iskaashi la sameeyay noocyo waaweyn si loo abuuro barxad loogu talagalay noocyada iyo taageerayaasha si ay sheekadooda ugu wada sheegaan. Macaamiisha Postano waxaa ka mid ah BCBG, CFDA, Evernote, Google, LA Kings, Oregon Ducks, YOOX, iyo kuwo kale oo badan.
Tags: raadinta hashtagpostanomuuqaalka bulshadawaxyaabaha ka kooban isticmaalebandhig muuqaal ah
Jul 21, 2014 markay ahayd 8:33 AM
Tani wax ma u tahay qorayaasha maalin walba aniga oo kale? Waxay i xasuusinaysaa xoogaa Rebelmouse.
Jul 21, 2014 markay tahay 2:04 PM
Uma badna inuu Gavin - Postano runtii ku takhasusay shirkadaha leh wax soo saarka muuqaalka muuqaalka, sida goobaha tafaariiqda, shirkadaha, dhacdooyinka iyo shirarka, iyo garoomada isboortiga!